मिर्गौला प्रत्यारोपणका १० वर्ष : दान दिने महिला, सुविधा लिने पुरुष « Nepal Health News नेपालको नं.१ जनस्वास्थ्य पत्रिका
मिर्गौला प्रत्यारोपणका १० वर्ष : दान दिने महिला, सुविधा लिने पुरुष
२०७५, २४ श्रावण बिहीबार ०४:२० मा प्रकाशित
बुहारीबाट मिर्गौला दान लिएर प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्यसत्ता हाँकिरहेका छन्। उनले १० वर्षअघि २१ वर्षीया भाइबुहारी अन्जन घिमिरेबाट मिर्गौला दान लिएका हुन्। ‘मुलुकलाई राम्रो योगदान गर्ने नेता हो भन्ने लाग्यो’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई मिर्गौला दान गरेकी घिमिरेले भनिन्, ‘राष्ट्रभक्त नेतालाई पुनर्जन्म दिनुपर्छ भन्ने लागेपछि मिर्गौला दिन तयार भएँ।’
उनी मात्र होइन, सामरी–४, नुवाकोटबाट बसाइँ सरी काठमाडौंको कपनमा बस्दै आएका प्रकाश सापकोटा पनि आमाबाट मिर्गौला लिएर स्वस्थ्य रूपमा घर व्यवहार चलाइरहेका छन्। डेढ दशकअघि छोरा प्रकाशलाई मिर्गौला दान गरेकी हुन्, ५९ वर्षीया आमा बिन्दाले।
स्वदेशमा प्रत्यारोपण सेवा नभएपछि ओलीले भारतको दिल्ली र सापकोटाले लखनऊमा गई मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराएका हुन्।
यी उदाहरणबाट पनि विशेषगरी पुरुषलाई मिर्गौला दान गर्नेमा महिला बढी भएको पुष्टि हुन्छ। ‘महिलाको मन विशाल हुन्छ। त्यही भएर नै मिर्गौला दान दिन उनीहरू अघि सरेको हुनुपर्छ’, घिमिरेले भनिन्।
नेपालमा पहिलो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको अहिले १० वर्ष पुगेको छ। यस अवधिमा पाँच सय ६ जना पीडितले मिर्गौला प्रत्यारोपण गराइसकेको अस्पतालका नेफ्रोलोजी विभाग प्रमुख प्रा.डा. दिव्यासिंह शाहले बताइन्। तीमध्ये ८५ प्रतिशत पुरुष र १५ प्रतिशत महिला छन्। १६ वर्षमुनिका आठ जना बालबालिकाको पनि प्रत्यारोपण गरिएको छ। मिर्गौला प्रत्यारोपणको सुविधा लिनेमा पुरुषको संख्या बढी छ। तर मिर्गौला दान दिनेमा भने महिला अघि रहेको उनको पनि स्वीकारोक्ति छ।
शिक्षण अस्पताल मात्र होइन, भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट पाँच वर्षयता ४ सय ७८ जनाले मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा लिएका छन्। केन्द्रका बिरामीमध्ये मिर्गौला लिनेमा ७८ प्रतिशत पुरुष र २१ प्रतिशत महिला रहेको केन्द्रका निर्देशक डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए। मिर्गौला दान गर्नेमा चाहिँ ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष रहेको उनको भनाइ छ।
मिर्गौला दान दिनेमा महिलाभन्दा पुरुषको संख्या आधा कम रहेको शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन प्रा.डा. उत्तमकुमार शर्माले बताए। शिक्षण अस्पतालमा भने ६८ प्रतिशत महिला र ३२ प्रतिशत पुरुषले मिर्गौला दान दिएका छन्। अहिले सातामा औसत दुई जनाले मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा लिइरहेको उनको भनाइ छ।
सामूहिक कार्यले गर्दा मिर्गौला प्रत्यारोपणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिन सकेकोमा गौरवबोध भएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. जगदीश अग्रवालले बताए। एक दशकयता सरकारी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र अन्य नीजि अस्पतालमा पनि प्रत्यारोपण सेवा लिने बढ्दै गएका छन्। हालसम्म एक हजारभन्दा बढी बिरामीले स्वदेशमै मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा लिइसकेका छन्। अन्नपुर्णपोष्टबाट
एक्युट मिर्गौला फेल के हो ?
मिर्गौलाको काम गर्ने क्षमतामा एकाएक कमी आउनुलाई तीब्र मिर्गौला खराबी (एक्युट किड्नी इन्जुरी) भनिन्छ ।
मिर्गाैला रोग सम्बन्धि धारणा र तथ्य
धारणाः सबै मिर्गाैला रोग निको नहुने हुन्छन् ।तथ्यः होइन, सबै मिर्गाैला रोग निको नहुने हुँदैनन्
कोरोनाको जोखिममा मिर्गौला रोगी
‘कोरोना पोजेटिभ आएकाले घरमा बसेँ । कसैले पनि छुन नहुने टाढाबाट हेर्ने मात्र । त्यही
मिर्गौला रोग लाग्न नदिने बाटो अवलम्बन गर्न जरुरी छ
नेपालमा मिर्गौला रोगको उपचारमा ३० वर्षको अवधिमा धेरै फड्को मारिसकेको छ । मुलुकमा डायलाईसिस, प्रत्यारोपण,